Wholesale Aluminium Strip ho an'ny mpanamboatra mombamomba | Aluminium Vaovao
Aluminium Strip ho an'ny piraofilina
Ny strip aluminium dia be mpampiasa amin'ny mombamomba ny jiro LED sy ny karazana kojakoja rehetra satria ny aluminium dia kely lanja noho ny metaly hafa fa ny kalitao avo lenta sy ny tsara kokoa 。Mamoaka ny 0,35 X 42mm mankany Alemana sy 1.2 mm X 8 mm mankany Italia izahay matetika.
Izahay dia mamokatra ny Coil aluminium avy amin'ny ingot avy amin'ny SMS Rolling Mill avy any Alemana sy Kampf Slitter. Ny sakan'ny minitra dia 8 mm ary ny hatevin'ny Min dia 0,1 mm ho an'ny tsipika miaraka amin'ny karazana firaka sy fifehezana rehetra.
Anarana Tady aluminium
hateviny 0,1mm - 5mm (fandeferana: ± 5%)
Ny sakany sy ny fandeferana 8 mm - 1500 mm (fandeferana: ± 1.0mm)
Lanja 300 -600kg isaky ny coil (na namboarina)
Surface matte ilany, iray lafiny mamirapiratra na ny lafiny roa mamiratra
Kalitao ambonin'ny Tsy misy pentina mainty, mariky ny tsipika, savony, madio sy malama, tsy misy tasy harafesina, kentrona ary rambony trondro. Ny kalitaon'ny velarantany dia tsy maintsy
fanamiana ary tsy misy mariky ny resaka.
Fitaovana fototra Steel / aluminium
ID fototra Ф76mm, Ф150mm (± 0,5mm)
Fonosana Tranga hazo maimaim-poana amin'ny Fumigation (ampahafantaro anay raha misy fangatahana manokana)
Fampiharana ampiasaina amin'ny karazana kojakoja rehetra
Manomeza fotoana ao anatin'ny 20 andro aorian'ny nahazoanao ny LC tany am-boalohany na fametrahana 30% avy amin'ny TT
F1: Iza isika?
Valiny: Tsy mpanamboatra sy mpivarotra Aluminium Foil fotsiny izahay,
fa koa mamokatra ravina aliminioma, coil aluminium, boribory aluminium, coil aluminium mifono loko ary takelaka aluminium misy zoro.
F2: Ahoana no fomba hanomezantsika serivisy tsara kokoa?
Mifantoka amin'ny antsipiriany rehetra amin'ny vokatra izahay, ao anatin'izany ny fanaraha-maso kalitao amin'ny akora, ny famokarana, ny fonosana, ny fandefasana, ny fandefasana ary ny fametrahana farany. ny fako mahatsiravina samy isika sy ny mpanjifa ivelany, tsy ny fakana ho an'ny fitaovana, fotoana, vola fotsiny, fa ny fifampatokisana, izay manandanja indrindra amin'ny orinasa iraisam-pirenena
Aza hadino izany na oviana na oviana!
F3: Inona no mahasamihafa anao sy ny mpifaninana aminao?
Teo aloha: Tapakila Aluminium ao an-trano
Manaraka: Volon-tsolika 8011 ho an'ny Sodina PP-AL-PP
Kitapo alimina ho an'ny fahazoan-dàlana sy takelaka fanaovana sonia
Taratry ny fitaratra Aluminium Strip
1100 Strip aluminium ho an'ny vera poaka